မိဘတှေ အားလုံး သိထားရမယျ့ ဆငျခွငျတုံ တရားရှိသူအဖွဈ ပွောငျးလဲပဈနိုငျသောအပွုအမှု (၆) မြိုး - Lifestyle Myanmar
Home Family မိဘတှေ အားလုံး သိထားရမယျ့ ဆငျခွငျတုံ တရားရှိသူအဖွဈ ပွောငျးလဲပဈနိုငျသောအပွုအမှု (၆) မြိုး
မိဘအားလုံးက ကိုယျ့သားသမီးတှကေို ခဈြတယျဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သားသမီးနှငျ့ ပတျသတျလာရငျ ကိုယျ့ကလေးမှ ကလေးလို့ထငျသော အရမျးအတ်တကွီးတဲ့ မိဘတှေ၊ မိဘဘဝဆိုတာ တခွားသူတှထေကျ ပိုပွီးအမြှျောအမွငျရှိသူ၊ အခှငျ့အရေးတှေ၊ အကြိုးခံစားခှငျ့တှေ အပွညျ့အဝရရှိထားသူလို့ မှတျယူကွတဲ့ တခြို့မိဘတှေ ရှိကွပါတယျ။ တခါတလမှော မိဘတှဟော ကိုယျ့သားသမီးအကွောငျး ဇာတျလမျးရှညျကွီးကို ပွောပွခွငျးဖွငျ့ လုပျဖျောကိုငျဘကျတှရေဲ့ အဖိုးတနျအခြိနျကို ဖွုနျးတတျကွပါတယျ။ ဘယျသူမှမမေးရငျတောငျ သူတို့ရဲ့တနျဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို မြှဝရေတာကို ပြျောရှငျကွပါတယျ။
မိသားစုအပျေါအခဈြကွီးတာက ကောငျးပမေယျ့ တခွားသူတှကေို မထိခိုကျစတေဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ ဘယျအရာမှ အစှနျးမရောကျသငျ့ဘူးလို့ ထငျပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ တခြို့မိဘတှမှော ရှိနိငျတဲ့ မကောငျးသော အပွုအမှုတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ လလေ့ာမှုတှမှော ဒီလိုအပွုအမှုတှကေ တခွားသူတှကေို စိတျဆိုးစရာဖွဈယုံသာမက မိဘကိုယျတိုငျနှငျ့ သူတို့ကလေးတှအေပျေါ ထိခိုကျစနေိုငျကွောငျး သကျသပွေထားပါတယျ။
၁။ ကလေးတဈယောကျဆိုတဲ့ ဆငျခွနှေငျ့အတူ လူမှုရေးစံခြိနျစံညှနျးမြားကို ခြိုးဖောကျခွငျး
တခြို့လူကွီးတှအေတှကျ ကလေးနဲ့ပတျသတျလာရငျ ယဘေုယအြားဖွငျ့ လကျခံထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ ခြိုးဖောကျမိရငျတောငျ တခြို့အပွုအမှုတှကေို ခှငျ့ပွုရမယျလို့ ခံယူထားပါတယျ။ ဒါက ဥပမာ- စူပါမားကတျမှာ တနျးစီတဲ့အခါ ကလေးမအပေဲဆိုပွီး ရှဆေုံ့းကို ကြျောတတျနရောယူတာမြိုး၊ ကလေးကို ပနျးခွံအလယျမှာ အဝတျအစားခြှတျပွီး သေးပေါကျစတောမြိုး၊ အမြားသူငါ စားသောကျနတေဲ့ ဆိုငျမှာ ကလေးဒိုကျပါလဲပေးတာမြိုး၊ အမြိုးသမီး အဝတျအစားလဲခနျးတဈခုထဲကို အရှယျရောကျလုနီးပါးသားကို ချေါသှားတာမြိုး စတဲ့ အသေးအမှားကအစ အကွီးကွီးထိ ရှိနိုငျပါတယျ။ အဲ့လိုမိဘတှကေို ဒီလိုမလုပျဖို့ သငျသှားပွောမယျဆိုရငျ သူတို့မှာ တနျးတူအခှငျ့အရေးရှိကွောငျး အျောလာနိုငျပါတယျ။
၂။ ကလေးတှကေ အမွဲတမျးမှနျတယျလို့ တှေးခွငျး
အရငျတုနျးက ကလေးတှဟော သူတို့မိဘတှေ ဘာပွောပွော လိုကျနာကွပွီး မိသားစုထဲမှာ မပွောရသလောကျရှိပါတယျ၊ ယခုခတျေမှာတော့ တခြို့ခတျေသဈ မိဘတှကေ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈနပေါတယျ။ သူတို့ကလေးတှဟော သူတို့အတှကျ အရေးပါဆုံးမိသားစုဝငျဖွဈပွီး ဘယျဝဖေနျမှုမဆို ဆတျဆတျထိမခံ ဖွဈလာကွပါတယျ။ (ဥပမာ- စတိုးဆိုငျတဈခုထဲမှာ စြေးဝယျတုနျး ကလေးက သူကွိုကျတာ တဈခုခုကို ယူပွီး အိတျထဲထညျ့လိုကျတယျဆိုပါစို့။ ‘အဈမသားပစ်စညျးတဈခုယူထားတယျနျော’လို့ ဝနျထမျးကပွောလာရငျ သားမယူရဘူးလလေို့ ပွောရမယျ့အစား “ကလေးသဘာဝ လိုခငျြလို့ ယူတာပေါ့”ဆိုတာမြိုးက ကိုယျ့အတှကျလညျးမကောငျး၊ ကလေးအတှကျလညျးမကောငျးပါဘူး။)
ဒီလိုမိဘတှဟော ကိုယျ့ကလေး ဘာအမှားလုပျလုပျ မြှတတယျလို့ ထငျကွပါတယျ။ သူက တခွားကလေးတှကေို ရိုကျလိုကျတာလား? သူတို့က အရငျစပွီး ရိုကျတာလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ! သားက သူ့အဈမဆီကနေ ပိုကျဆံခိုးတာလား? နောငျပွောငျတာလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ။! စတိုးဆိုငျထဲက သကွားလုံးတခြို့ကို မဝယျဘဲ စားနတောလား? သူက ကလေးပဲလေ, ကလေးဆိုတော့ စားခငျြလို့ ဖွဈမှာပါလေ! လို့တှေးတတျကွပါတယျ။ ထိုကဲ့သို့ လူကွီးတှဟော သူတို့ကလေး မကောငျးတာတှေ လုပျတဲ့အတှကျ မကွာခဏ တာဝနျယူလိုစိတျမရှိကွပါဘူး။ သူတို့သငျယူလလေ့ာနတောလေ၊ ကလေးတဈယောကျမို့လို့ ဆိုကွပါတယျ။ တကယျတော့ ဒါတှကေ တခွားသူတှကေို ဒေါသထှကျစပေါတယျ။
၃။ ကလေးမရှိတဲ့ သူတှထေကျ ပိုကောငျးတယျလို့ တှေးခွငျး
ကလေးတှဟော လူတိုငျးအတှကျတော့ မိသားစုဝငျအသဈတှေ မဟုတျပါဘူး။ တခါတရံ ကလေးတှကေို မိဘတှရေဲ့ လူမူရေးအဆငျ့အတနျး တိုးမွှငျ့ဖို့ နညျးလမျးတဈခု အဖွဈသာ အသုံးပွုကွပါတယျ။ တခြို့လူကွီးတှကေ သူတို့ ကလေးကို မှေးပေးပွီးတဲ့အခါ သူတို့မှာ နိုငျငံသား တာဝနျကပြွေီလို့ ထငျကွပါတယျ။ သူတို့ကလေးက သူတို့ကို ပိုပွီးအရေးပါစတေယျလို့ ထငျကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဒါက ဘဝမှာ အကြိုးစီးပှားတှေ(သို့) တခွားအောငျမွငျမှုတှေ မရှိတဲ့သူတှမှော ပိုပွီးသိသာပါတယျ။ မိဘတဈယောကျဖွဈလာယုံနဲ့ သူတို့ဟာ အောငျမွငျတဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးရှိသူနှငျ့ ကလေးမရှိသူ မိတျဆှတှေထေကျ ပိုကောငျးတယျလို့ ခံစားရနိုငျပါတယျ။ လူလှတျတှကေ မိသားစုရှိသူထကျ တဈနှဈကို ၅ကွိမျလောကျ အားလပျရကျ အပနျးဖွခေရီးထှကျနိုငျကွတာကွောငျ့ မိသားစုရှိသူတှကေ “ဒီကောငျ အားနေ ငှပေဲဖွုနျးနတေယျ၊ စုမယျဆောငျးမယျမရှိဘူး၊ ဒီကောငျ မရငျ့ကကျြသေးဘူး”လို့ ဆိုလာနိုငျပါတယျ။ ဒီအပွုအမှုကွောငျ့ လူတှကေ သူတို့ကို စကားပွောခငျြကွမှာ မဟုတျပါဘူး။
၄။ အလုပျအပျေါမှာ အထငျသေးသော သဘောထား ထားရှိခွငျး
အထူးသဖွငျ့ ကလေးတှအေမြားကွီး မှေးထားတဲ့ တခြို့အမြိုးသမီးတှဟော ကလေးမှေးပွီးရငျ ကလေးပွုစုပြိုးထောငျတဲ့နရောမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို အပွညျ့အဝ နှဈမွှုပျထားဖို့ ဆုံးဖွတျတတျကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုက မှနျကနျတဲ့ ရှေးခယျြမှုမဟုတျကွောငျးလညျး သူတို့ နားလညျသဘောပေါကျကွပါတယျ။ တတျနိုငျမြှ အမွနျဆုံး အလုပျပွနျလုပျခငျြကွတဲ့ အမြိုးသမီးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ တခြို့က အောငျမွငျတဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးတဈခု ရှိဖို့အတှကျ ကလေးပွုစုစောငျ့ရှောကျမှုကို အရှုံးပေးဖို့တောငျ အဆငျသငျ့ဖွဈကွပါတယျ။
တဈခြို့မိခငျတှကေ သူတို့မှာ ကလေးတှရှေိတယျဆိုတဲ့ အခကျြနဲ့တငျ သူတို့ကို တခွားသူတှေ လေးစားဖို့ လိုလားကွပွီး လူတှအေားလုံးဟာ ကိုယျ့လုပျနရေတဲ့ အလုပျတှကေို မုနျးကွပမေယျ့ ပိုကျဆံအတှကျ အလုပျလုပျနရေတယျလို့ ထငျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဲဒီလိုမိခငျတှဟော အလုပျလုပျနတေဲ့ တခွားမိခငျတှအေပျေါ အနုတျလက်ခဏာ သဘောထားတဈခုရှိကွပါတယျ။
၅။ သူတို့ကလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ ပထမဦးစားပေးဖွဈခွငျးကို ဂုဏျယူခွငျး
သူတို့သားသမီးတှဟော အကောငျးတကာ့ အကောငျးဆုံးမှ ရသငျ့တယျလို့ တခြို့မိဘတှကေ ထငျကွတယျ။ ထိုကဲ့သို့သော မိသားစုကလာတဲ့ မိခငျတဈယောကျဟာ သူမရဲ့ကလေးကို ပွုစုစောငျ့ရှောကျနိုငျဖို့အတှကျ သူမရဲ့ အောငျမွငျနတေဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးကို ဘယျလို စှနျ့လှတျထားတယျဆိုတာ ဂုဏျယူစှာ ရှငျးပွနိုငျပါတယျ။ ဖခငျတဈယောကျဟာ သူရဲ့ ကလေးတှကေ ကစားစရာ အသဈတှဖွေဈစေ၊ devices အသဈတှဖွေဈစေ တခုခုကို အမွဲတမျး လိုအပျနတောကွောငျ့ နှဈအတျောကွာ အပနျးဖွခေရီးမထှကျနိုငျကွောငျး ပွောလာနိုငျပါတယျ။
ဒီခဉျြးကပျမှုက ကလေးတှအေတှကျ ဘယျလိုကောငျးသလဲ၊ ဆိုးသလဲဆိုတာ ပွောဖို့ တကယျခကျခဲပါတယျ။ “သူတို့လိုခငျြတာ တတိုငျးရနတေယျ”လို့ တှေးတဲ့ ကလေးတဈယောကျဟာ မိဘတှကေ အမွဲတမျးပံ့ပိုးပေးနတောကွောငျ့ ကွီးပွငျးတဲ့အထိ သူတို့ကိုယျသူတို့ အားကိုးခငျြတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ ဒီလိုကလေးတှဟော အပွငျထှကျ အလုပျမလုပျခငျြကွတာကွောငျ့ တဈခုခု အကူအညီလိုအပျပွီဆိုရငျ မိဘဆီ ပွေးသှားတတျကွပါတယျ၊ ဒါက သကျကွီးရှယျအိုမိဘဆှမြေိုးတှဟော အရှယျရောကျပွီးတဲ့ သားတှေ၊ သမီးတှကေို ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျနရေဆဲ အခွအေနမြေားကို ဦးတညျစပေါတယျ။
၆။ အထူးအခှငျ့အရေးတှေ ပေးဖို့ လိုအပျတယျလို့ ထငျခွငျး
တကယျတော့ ဒါက ဘတျဈကားပျေါမှာ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတဈယောကျကို ထိုငျခုံတဈလုံး ပေးခွငျးအကွောငျး မဟုတျပါဘူး။ ဒါက ပိုကွီးမားတဲအရာတှနေဲ့ ပတျသတျတာပါ။ ဥပမာ- ဒီလို မိဘတှကေ အိမျမှာ ကလေးတဈယာကျရှိတာကွောငျ့ သူတို့ အိမျစောစောပွနျဖို့ (သို့)ပိတျရကျယူဖို့ သူဌေးကို မကွာခဏ ခှငျ့တောငျးတတျကွပါတယျ။
ဘတျဈကားစီးတဲ့အခါ လူအမြားစုက ကလေးခြီထားတဲ့ မိခငျတှရေ့ငျ ထိုငျခုံပေးတတျတာမြိုး၊ ကလေးခြီပေးထားတာမြိုး၊ ကူညီပေးတာမြိုး ရှိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့ကလေးမိခငျတှကေ ပေါငျပျေါတငျထားလို့ရတဲ့ ကလေးကို ဘေးခုံမှာခပြွီး တခွားသူကို ပေးမထိုငျတာမြိုးစတဲ့ လိုတာထကျ အခှငျ့အရေးယူတာမြိုးတှေ ရှိကွပါတယျ။ တခါတလေ သူတို့ဟာ တနျးစီရငျ ထိပျဆုံးကနရောရဖို့ ၊ ပနျးခွံခုံတနျးရှညျပျေါမှာ သူတို့ကို ထိုငျခှငျ့ပေးဖို့ တခွားသူတှကေို တောငျးဆိုတတျကွပါတယျ။ ဒီအရာတှကေ ကလေးမအဟော ကလေးကို ဗနျးပွပွီး ကိုယျကောငျးစားဖို့အတှကျ အခှငျ့အရေးယူတယျလို့ တဈခွားသူတှကေို ခံစားရစပေါတယျ။ တကယျတော့ လူတိုငျးက ဒါကို သညျးမခံနိုငျပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ကလေးမခဈြတတျတဲ့ သူတှအေတှကျတော့ စိတျအနှောကျအယှကျပါပဲ။
သငျ့ရဲ့ ဘဝဟာ သငျ့ကလေးပျေါ လုံးဝဗဟိုပွုတာက ဘာ့ကွောငျ့ အန်တရာယျရှိတာလဲ?
ခတျေသဈလလေ့ာမှုတှမှော ကလေးတဈယောကျအပျေါ လုံးဝပုံအပျထားခွငျးက ကလေးနှငျ့ မိဘတှကေို အန်တရာယျဖွဈနိုငျကွောငျး တှရေ့ပါတယျ။
လူငယျမိခငျအတျောမြားမြားက သူတို့ဟာ လူမှုရေး လှုပျရှားမှုတှေ မရှိတာ၊ အားလပျခြိနျ မရှိတာတှကွေောငျ့ စိတျကနြေပျမှု မရရှိခဲ့ကွောငျး၊ စိတျဓါတျကခြဲ့ကွောငျး ဝနျခံခဲ့ပါတယျ။
ကလေးမရှိတဲ့သူတှဟော သူတို့လိုခငျြတာတှပေျေါမှာ ပိုကျဆံပိုပွီးသုံးနိုငျ၊ ပိုပွီးခရီးသှားနိုငျတာကွောငျ့ ကလေးမရှိသူတှကေို ငယျရှယျတဲ့ မိဘတှကေ မကွာခဏ မနာလိုဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။
ကလေးအပျေါမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို လုံးဝမွုပျနှံထားတဲ့ သူတှဟော ကလေးတှကွေီးပွငျး လာတဲ့အခါ၊ အိမျကို စှနျ့ခှာသှားတဲ့အခါ ဆုံးရှုံးသှားသလို၊ ဘာမှမရှိတော့သလို မကွာခဏ ခံစားကွရပါတယျ။
ကလေးဘဝမှာ အမြားကွီး ဂရုစိုကျခံရတဲ့ တခြို့ကလေးတှဟော တဈခုခုဆိုရငျ အလိုမကစြိတျတှေ၊ စိတျဓါတျကတြာတှေ၊ စိုးရိမျပူပနျမှုတှနှေငျ့ ကွီးပွငျးကွရပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို အားကိုးဖို့ အသုံးမခခြဲ့ကွတာကွောငျ့ လူကွီးဘဝကို အသုံးခဖြို့ သူတို့အတှကျ ခကျခဲပါတယျ။
တခွားတဈဖကျကကွညျ့ရငျ ကိုယျ့ကိုယျကို အားကိုးတဲ့ကလေးတှဟော ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိပွီး ပိုပွီးပြျောရှငျသော လူကွီးတှအေဖွဈ ကွီးပွငျးကွပါတယျ၊ သူတို့အကွိုကျဆုံး ဝါသနာတှနေဲ့ ခငျပှနျးအပျေါ သားသမီးအပျေါ အခြိနျတှေ ပိုပေးထားတဲ့ မိဘတှဟော အိမျထောငျရေးကှာရှငျးမှု နညျးပါးသလို သူတို့မိသားစုထဲမှာ ပိုပွီး အဆငျပွသေလို ခံစားရပါတယျ။
မိဘတွေ အားလုံး သိထားရမယ့် ဆင်ခြင်တုံ တရားရှိသူအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သောအပြုအမှု (၆) မျိုး
မိဘအားလုံးက ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သားသမီးနှင့် ပတ်သတ်လာရင် ကိုယ့်ကလေးမှ ကလေးလို့ထင်သော အရမ်းအတ္တကြီးတဲ့ မိဘတွေ၊ မိဘဘဝဆိုတာ တခြားသူတွေထက် ပိုပြီးအမျှော်အမြင်ရှိသူ၊ အခွင့်အရေးတွေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ အပြည့်အဝရရှိထားသူလို့ မှတ်ယူကြတဲ့ တချို့မိဘတွေ ရှိကြပါတယ်။ တခါတလေမှာ မိဘတွေဟာ ကိုယ့်သားသမီးအကြောင်း ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးကို ပြောပြခြင်းဖြင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေရဲ့ အဖိုးတန်အချိန်ကို ဖြုန်းတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှမမေးရင်တောင် သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေရတာကို ပျော်ရွင်ကြပါတယ်။
မိသားစုအပေါ်အချစ်ကြီးတာက ကောင်းပေမယ့် တခြားသူတွေကို မထိခိုက်စေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်အရာမှ အစွန်းမရောက်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ တချို့မိဘတွေမှာ ရှိနိင်တဲ့ မကောင်းသော အပြုအမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေမှာ ဒီလိုအပြုအမှုတွေက တခြားသူတွေကို စိတ်ဆိုးစရာဖြစ်ယုံသာမက မိဘကိုယ်တိုင်နှင့် သူတို့ကလေးတွေအပေါ် ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း သက်သေပြထားပါတယ်။
၁။ ကလေးတစ်ယောက်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနှင့်အတူ လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း
တချို့လူကြီးတွေအတွက် ကလေးနဲ့ပတ်သတ်လာရင် ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ချိုးဖောက်မိရင်တောင် တချို့အပြုအမှုတွေကို ခွင့်ပြုရမယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။ ဒါက ဥပမာ- စူပါမားကတ်မှာ တန်းစီတဲ့အခါ ကလေးမအေပဲဆိုပြီး ရှေ့ဆုံးကို ကျော်တတ်နေရာယူတာမျိုး၊ ကလေးကို ပန်းခြံအလယ်မှာ အဝတ်အစားချွတ်ပြီး သေးပေါက်စေတာမျိုး၊ အများသူငါ စားသောက်နေတဲ့ ဆိုင်မှာ ကလေးဒိုက်ပါလဲပေးတာမျိုး၊ အမျိုးသမီး အဝတ်အစားလဲခန်းတစ်ခုထဲကို အရွယ်ရောက်လုနီးပါးသားကို ခေါ်သွားတာမျိုး စတဲ့ အသေးအမွှားကအစ အကြီးကြီးထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုမိဘတွေကို ဒီလိုမလုပ်ဖို့ သင်သွားပြောမယ်ဆိုရင် သူတို့မှာ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြောင်း အော်လာနိုင်ပါတယ်။
၂။ ကလေးတွေက အမြဲတမ်းမှန်တယ်လို့ တွေးခြင်း
အရင်တုန်းက ကလေးတွေဟာ သူတို့မိဘတွေ ဘာပြောပြော လိုက်နာကြပြီး မိသားစုထဲမှာ မပြောရသလောက်ရှိပါတယ်၊ ယခုခေတ်မှာတော့ တချို့ခေတ်သစ် မိဘတွေက ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ကလေးတွေဟာ သူတို့အတွက် အရေးပါဆုံးမိသားစုဝင်ဖြစ်ပြီး ဘယ်ဝေဖန်မှုမဆို ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ (ဥပမာ- စတိုးဆိုင်တစ်ခုထဲမှာ ဈေးဝယ်တုန်း ကလေးက သူကြိုက်တာ တစ်ခုခုကို ယူပြီး အိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ ‘အစ်မသားပစ္စည်းတစ်ခုယူထားတယ်နော်’လို့ ဝန်ထမ်းကပြောလာရင် သားမယူရဘူးလေလို့ ပြောရမယ့်အစား “ကလေးသဘာဝ လိုချင်လို့ ယူတာပေါ့”ဆိုတာမျိုးက ကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်း၊ ကလေးအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူး။)
ဒီလိုမိဘတွေဟာ ကိုယ့်ကလေး ဘာအမှားလုပ်လုပ် မျှတတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ သူက တခြားကလေးတွေကို ရိုက်လိုက်တာလား? သူတို့က အရင်စပြီး ရိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ! သားက သူ့အစ်မဆီကနေ ပိုက်ဆံခိုးတာလား? နောင်ပြောင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။! စတိုးဆိုင်ထဲက သကြားလုံးတချို့ကို မဝယ်ဘဲ စားနေတာလား? သူက ကလေးပဲလေ, ကလေးဆိုတော့ စားချင်လို့ ဖြစ်မှာပါလေ! လို့တွေးတတ်ကြပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ လူကြီးတွေဟာ သူတို့ကလေး မကောင်းတာတွေ လုပ်တဲ့အတွက် မကြာခဏ တာဝန်ယူလိုစိတ်မရှိကြပါဘူး။ သူတို့သင်ယူလေ့လာနေတာလေ၊ ကလေးတစ်ယောက်မို့လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါတွေက တခြားသူတွေကို ဒေါသထွက်စေပါတယ်။
၃။ ကလေးမရှိတဲ့ သူတွေထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ တွေးခြင်း
ကလေးတွေဟာ လူတိုင်းအတွက်တော့ မိသားစုဝင်အသစ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံ ကလေးတွေကို မိဘတွေရဲ့ လူမူရေးအဆင့်အတန်း တိုးမြှင့်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခု အဖြစ်သာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ တချို့လူကြီးတွေက သူတို့ ကလေးကို မွေးပေးပြီးတဲ့အခါ သူတို့မှာ နိုင်ငံသား တာဝန်ကျေပြီလို့ ထင်ကြပါတယ်။ သူတို့ကလေးက သူတို့ကို ပိုပြီးအရေးပါစေတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒါက ဘဝမှာ အကျိုးစီးပွားတွေ(သို့) တခြားအောင်မြင်မှုတွေ မရှိတဲ့သူတွေမှာ ပိုပြီးသိသာပါတယ်။ မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်လာယုံနဲ့ သူတို့ဟာ အောင်မြင်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသူနှင့် ကလေးမရှိသူ မိတ်ဆွေတွေထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ လူလွတ်တွေက မိသားစုရှိသူထက် တစ်နှစ်ကို ၅ကြိမ်လောက် အားလပ်ရက် အပန်းဖြေခရီးထွက်နိုင်ကြတာကြောင့် မိသားစုရှိသူတွေက “ဒီကောင် အားနေ ငွေပဲဖြုန်းနေတယ်၊ စုမယ်ဆောင်းမယ်မရှိဘူး၊ ဒီကောင် မရင့်ကျက်သေးဘူး”လို့ ဆိုလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပြုအမှုကြောင့် လူတွေက သူတို့ကို စကားပြောချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၄။ အလုပ်အပေါ်မှာ အထင်သေးသော သဘောထား ထားရှိခြင်း
အထူးသဖြင့် ကလေးတွေအများကြီး မွေးထားတဲ့ တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ ကလေးမွေးပြီးရင် ကလေးပြုစုပျိုးထောင်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြည့်အဝ နှစ်မြှုပ်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုက မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ကြောင်းလည်း သူတို့ နားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ တတ်နိုင်မျှ အမြန်ဆုံး အလုပ်ပြန်လုပ်ချင်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့က အောင်မြင်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခု ရှိဖို့အတွက် ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကို အရှုံးပေးဖို့တောင် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပါတယ်။
တစ်ချို့မိခင်တွေက သူတို့မှာ ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့တင် သူတို့ကို တခြားသူတွေ လေးစားဖို့ လိုလားကြပြီး လူတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တွေကို မုန်းကြပေမယ့် ပိုက်ဆံအတွက် အလုပ်လုပ်နေရတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီလိုမိခင်တွေဟာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ တခြားမိခင်တွေအပေါ် အနုတ်လက္ခဏာ သဘောထားတစ်ခုရှိကြပါတယ်။
၅။ သူတို့ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးစားပေးဖြစ်ခြင်းကို ဂုဏ်ယူခြင်း
သူတို့သားသမီးတွေဟာ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးမှ ရသင့်တယ်လို့ တချို့မိဘတွေက ထင်ကြတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော မိသားစုကလာတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ကလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက် သူမရဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ဘယ်လို စွန့်လွှတ်ထားတယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစွာ ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ ဖခင်တစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ ကလေးတွေက ကစားစရာ အသစ်တွေဖြစ်စေ၊ devices အသစ်တွေဖြစ်စေ တခုခုကို အမြဲတမ်း လိုအပ်နေတာကြောင့် နှစ်အတော်ကြာ အပန်းဖြေခရီးမထွက်နိုင်ကြောင်း ပြောလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီချဉ်းကပ်မှုက ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လိုကောင်းသလဲ၊ ဆိုးသလဲဆိုတာ ပြောဖို့ တကယ်ခက်ခဲပါတယ်။ “သူတို့လိုချင်တာ တတိုင်းရနေတယ်”လို့ တွေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေက အမြဲတမ်းပံ့ပိုးပေးနေတာကြောင့် ကြီးပြင်းတဲ့အထိ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အားကိုးချင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုကလေးတွေဟာ အပြင်ထွက် အလုပ်မလုပ်ချင်ကြတာကြောင့် တစ်ခုခု အကူအညီလိုအပ်ပြီဆိုရင် မိဘဆီ ပြေးသွားတတ်ကြပါတယ်၊ ဒါက သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘဆွေမျိုးတွေဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ သားတွေ၊ သမီးတွေကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေရဆဲ အခြေအနေများကို ဦးတည်စေပါတယ်။
၆။ အထူးအခွင့်အရေးတွေ ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ခြင်း
တကယ်တော့ ဒါက ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ထိုင်ခုံတစ်လုံး ပေးခြင်းအကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက ပိုကြီးမားတဲအရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်တာပါ။ ဥပမာ- ဒီလို မိဘတွေက အိမ်မှာ ကလေးတစ်ယာက်ရှိတာကြောင့် သူတို့ အိမ်စောစောပြန်ဖို့ (သို့)ပိတ်ရက်ယူဖို့ သူဌေးကို မကြာခဏ ခွင့်တောင်းတတ်ကြပါတယ်။
ဘတ်စ်ကားစီးတဲ့အခါ လူအများစုက ကလေးချီထားတဲ့ မိခင်တွေ့ရင် ထိုင်ခုံပေးတတ်တာမျိုး၊ ကလေးချီပေးထားတာမျိုး၊ ကူညီပေးတာမျိုး ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကလေးမိခင်တွေက ပေါင်ပေါ်တင်ထားလို့ရတဲ့ ကလေးကို ဘေးခုံမှာချပြီး တခြားသူကို ပေးမထိုင်တာမျိုးစတဲ့ လိုတာထက် အခွင့်အရေးယူတာမျိုးတွေ ရှိကြပါတယ်။ တခါတလေ သူတို့ဟာ တန်းစီရင် ထိပ်ဆုံးကနေရာရဖို့ ၊ ပန်းခြံခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ သူတို့ကို ထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ တခြားသူတွေကို တောင်းဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအရာတွေက ကလေးမအေဟာ ကလေးကို ဗန်းပြပြီး ကိုယ်ကောင်းစားဖို့အတွက် အခွင့်အရေးယူတယ်လို့ တစ်ခြားသူတွေကို ခံစားရစေပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတိုင်းက ဒါကို သည်းမခံနိုင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကလေးမချစ်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ စိတ်အနှောက်အယှက်ပါပဲ။
သင့်ရဲ့ ဘဝဟာ သင့်ကလေးပေါ် လုံးဝဗဟိုပြုတာက ဘာ့ကြောင့် အန္တရာယ်ရှိတာလဲ?
ခေတ်သစ်လေ့လာမှုတွေမှာ ကလေးတစ်ယောက်အပေါ် လုံးဝပုံအပ်ထားခြင်းက ကလေးနှင့် မိဘတွေကို အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
လူငယ်မိခင်အတော်များများက သူတို့ဟာ လူမှုရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိတာ၊ အားလပ်ချိန် မရှိတာတွေကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှု မရရှိခဲ့ကြောင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ကလေးမရှိတဲ့သူတွေဟာ သူတို့လိုချင်တာတွေပေါ်မှာ ပိုက်ဆံပိုပြီးသုံးနိုင်၊ ပိုပြီးခရီးသွားနိုင်တာကြောင့် ကလေးမရှိသူတွေကို ငယ်ရွယ်တဲ့ မိဘတွေက မကြာခဏ မနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကလေးအပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုံးဝမြုပ်နှံထားတဲ့ သူတွေဟာ ကလေးတွေကြီးပြင်း လာတဲ့အခါ၊ အိမ်ကို စွန့်ခွာသွားတဲ့အခါ ဆုံးရှုံးသွားသလို၊ ဘာမှမရှိတော့သလို မကြာခဏ ခံစားကြရပါတယ်။
ကလေးဘဝမှာ အများကြီး ဂရုစိုက်ခံရတဲ့ တချို့ကလေးတွေဟာ တစ်ခုခုဆိုရင် အလိုမကျစိတ်တွေ၊ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနှင့် ကြီးပြင်းကြရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးဖို့ အသုံးမချခဲ့ကြတာကြောင့် လူကြီးဘဝကို အသုံးချဖို့ သူတို့အတွက် ခက်ခဲပါတယ်။
တခြားတစ်ဖက်ကကြည့်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးတဲ့ကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး ပိုပြီးပျော်ရွင်သော လူကြီးတွေအဖြစ် ကြီးပြင်းကြပါတယ်၊ သူတို့အကြိုက်ဆုံး ဝါသနာတွေနဲ့ ခင်ပွန်းအပေါ် သားသမီးအပေါ် အချိန်တွေ ပိုပေးထားတဲ့ မိဘတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်းမှု နည်းပါးသလို သူတို့မိသားစုထဲမှာ ပိုပြီး အဆင်ပြေသလို ခံစားရပါတယ်။
Previous articleနလေ့ညျစာစားပွီးတိုငျး အိပျငိုကျတတျတဲ့ အကငျြ့ကို ဘယျလိုဖြောကျမလဲ
Next articleHIV ဗိုငျးရပျဈပိုးကို အမွဈပွကုသနိုငျတဲ့ နညျးပညာ သုတသေနပညာရှငျမြား စမျးသပျအောငျမွငျ